Lisi-pifidianana hosoka :: Migadra vonjimaika ny lehiben'ny rantsan' ny CENI iray • AoRaha
Lisi-pifidianana hosoka Migadra vonjimaika ny lehiben’ny rantsan’ ny CENI iray
Nanabontsina ny lisi-pifidianana sady nanomana tetika hangalaram-bato mialoha mba hampandaniana kandida iray amin’ny fifidi- anana solombavambahoaka hatao amin’ny 27 mey 2019 no isan’ny niampangana an’ity filohan’ny rantsamangaikan’ny (Ced) vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) any amin’ ny distrikan’Ihosy ity. Ny talata 7 mey 2019 izy no naiditra am-ponja vonjimaika ao Ihosy ihany.
Ny fitarainana nataon’ ireo kandidà hafa sy ny sefo fokontany any an-toerana no nahatrarana ny fikonon kononana lisitra hosoka. Nanamarina ny fisian’io tranga io Rakotondrazaka Fano, mpampaka-teny eo anivon’ny Ceni, izay nanambara fa “handefa teknisiana avy ao amin’ny sampana informatika izahay mba hijerena akaiky ny isan’ireo olona natovana tsy ara-dalàna ireo, sady hahafahana manala izany mialoha ny 15 mey, daty fanamarinana ny lisitra farany. Ireo olona voamarina sy voasoratra anarana any anatin’ny karinem-pokontany ka voaporofo fa mbola velona ihany no afaka misoratra”.
Manoloana izao olana eo anivon’ny CED izao ihany, dia nandrenesam-pitarainana koa ny any Belo ambonin’iTsiribihina. “Tsy nangarahara ny fomba nanendrena ny filohan’ny CED”, hoy ny kandida iray any amin’io distrika io.
Fampitandremana maro no efa natao manoloana ny tsy fanarahan-dalàna, ary efa fotoanan’ny fandraisan’ andraikitra izao. “Efa any am-pelantanan’ny Fitsarana ity raharaha fanaovana lisitra hosoka ay Ihosy ity. Eo am-piandrasana ny didim-pitsarana hivoaka isika ankehitriny. Tsy miandry ela fa soloina avy hatrany ireo CED rehetra tsy manara-dalàna sy mampiahiahy”, hoy hatrany Rakotondrazaka Fano.
Mampanahy ihany ny tranga toy izao. Vao distrika roa, ka ny iray no efa nandraisana fepetra, ireto efa mitsinkafona ireto.
Governemanta Noesorina teo amin’ny toerany ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena
Ady amin’ny kolikoly Nanao sonia fifanekena ireo mpitantana eto Iarivo
Pilo Kely aroson’i Mamy Be
Fampielezan-kevitra :: Feno fanahiana ny Kmf/Cnoe, mihetsika koa ny prefektiora